IIMpanjaka 16: 5-18
Tamin'izany andro izany Rezina. mpanjakan'i Syria, dia nahalasa an'i Elota ho isan'ny fanjakan'i Syria ka nandroaka ny Jiosy hiala tao; ary ny Syriana nankany Elota ka monina ao mandraka andro-any.
Ary Ahaza naniraka olona ho any amin'i Tiglato-pilesera, mpanjakan'i Asyria, hanao hoe : Mpanomponao sy zanakao aho; miakara, ka vonjeo aho tsy ho azon'ny mpanjakan'i Syria sy ny mpanjakan'ny Isiraely, izay efa mitsangana hiady amiko.
Dia nanaiky ny teniny ny mpanjakan'i Asyria ka niakatra hamely an'i Damaskosy ary nahafaka azy; dia nentiny ho any Kira ny olona nobaboiny; fa Rezina kosa novonoiny.
Ary Oria mpisorona dia nanao alitara : araka ny marika rehetra nampitondrain'i Ahaza mpanjaka avy tany Damaskosy no nanaovan'i Oria mpisorona azy mandra-pihavin'i Ahaza mpanjaka avy tany Damaskosy.
Ary ny alitara varahina kosa, izay teo anatrehan'i Jehovah, dia nafindrany hiala eo anoloan'ny trano -- dia eo anelanelan'ny alitara vaovao sy ny tranon'i Jehovah -- ka nataony teo avaratry ny alitarany.
Ary Ahaza mpanjaka nandidy an'i Oria mpisorona hoe : Eo ambonin'ny alitara lehibe no andoroy ny fanatitra dorana maraina sy ny fanatitra hohanina hariva sy ny fanatitra dorana mbamin'ny fanatitra hohanina izay ho an'ny mpanjaka, ary ny fanatitra dorana mbamin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra aidina izay ho an'ny vahoaka rehetra; ary ny ra rehetra amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra alatsa-dra hafa dia hatopinao aminy; ary ny amin'ny alitara varahina dia mbola hataoko fanontanian-javatra.
Ary nesorin'i Ahaza mpanjaka ny kibon'ny fitoeran-tavin-drano; ary nesoriny tavin-drano, ary ilay tavin-drano lehibe[Heb. ranomasina.] dia nampidininy niala tamin'ireo omby varahina izay teo ambaniny ka nataony teo ambony lampivato.
Ary ny Fialofana tamin'Sabata, izay natao teo akaikin'ny trano, sy ny fidirana ivelany izay an'ny mpanjaka, dia nafindrany ho ao an-tranon'i Jehovah noho ny tahony ny mpanjakan'i Asyria.